बाराको बारागढ़ी गाउपालिका मलाहिमा मोटर साइकल दुर्घटना हुदा एक जना गम्भीर घाइते – Kanika Khabar
Kanika Khabar १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार २०:२४ July 30, 2021 मा प्रकाशित
साउन १५, बारा ।
बाराको बारागढ़ी गाउपालिकामा एक जना मोटर साइकल दुर्घटना हुदा गम्भीर घाइते भएका छन् । बारागढ़ी गाउपालिका वडा न २ मलाही घर भएको ज्वाला साह मोटर साइकलमा दुर्घटना हुदा गम्भीर घाइते भएका छन् ।
आज बिहान करिब १० बजेको समयमा मलाही चौक मा दक्षिण बाट उतर तर्फा गइरहेको प्रदेश न ३. ० १ . ०२२ च ८५०९ नम्बर स्कार्पिओ र बिपरित दिशाबाट आईरहेका ना ५४ प् ९८४६ नम्बर को मोटर साइकललाई ठकर दिदा दुर्घटना भएको छ।
घाइते साह लाइ एलेस न्युरो होस्पिटल बिरगंजको आइसियुमा उपचार भईरहेको छ । दुवै गाडी अहिले श्रीपुरा प्रहरी चौकिको नियन्त्रणमा रहेको स्थानीय डा. रामदिनेश शर्मा जानकारी दिनु भएको छ। थप बिवण आउन बाकी रहेको छ ।